Iingcebiso ezi-4 zokuba ngabokuqala kwinjini yokukhangela kuGoogle -I-Creativos kwi-Intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba kukho ugqatso olude kuneesekethe zeFomula 1, lulo ugqatso lokukhangela kuGoogle. Kwinqanaba le-SEO, nabani na ofuna ukuba ngowokuqala kuluntu. Xa umntu ebhala igama, ukuba indawo yethu ijongene nayo, sifuna ukuvela kuqala. Ewe, ngezantsi nje kwabo bahlawulayo. Ubuncinci siyazama.
KuGoogle kunzima kakhulu ukuzibeka endaweni yakho hayi kuphela tips kufanelekile kuthi. Ukugcwala komsebenzisi kunye nenani elikhulu lomxholo lidlala indima. Kungenxa yoko le nto la manyathelo alandelayo esiza kuwathatha kwinqaku ingelilo iqhinga. Ziliqela leemeko ekuya kufuneka uzenze, kodwa, akonelanga, ukuba uyazazi ezi. Umxholo kufuneka uhambelane neethegi, iindidi, inkcazo yemeta, njl. Ngale ndlela uya kusondela kwisikhundla 1 kule nqanaba kwiprofayili yakho yokukhangela.
Oku kulandelayo iingcebiso zokuba ngowokuqala kwiinjini yokukhangela zikaGoogle Baya kukusondeza kuyo.
2 Tune kunye nabaphulaphuli bakho
3 Ukhuphiswano, ikwalidlelane
4 Iifoto, zibaluleke ngakumbi kunokuba kubonakala
Ukwenza ikhalenda yokuhlela kukuvumela ukuba ubeke phambili imisebenzi yakho yomxholo, Ngena kwi-cadence ngebhlog yakho yokuthumela kunye nomsebenzi wentlalo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, gcina abaphulaphuli bakho bezibandakanya ngokuthintela umxholo wakho ukuba ungami okanye uphindaphinde.
Ulungelelwaniso lubaluleke kakhulu kwimpumelelonangona isicwangciso sakho somxholo singasoloko kulula ukunamathela kuso. Qala ngokuseta ikhalenda, emva koko jongana nengqondo-yeyiphi imibuzo onokuthi uyiphendule? Zeziphi izihloko ezifanelekileyo? Ungakhuthaza njani?
Yahlula umxholo wakho kwizithuba zentlalo, iiposti zebhlog, kwiikopi ezikwisiza, izingqinisiso, iividiyo, njl. Ngokwendlela yebhlog, iwebhu, indawo ngesandla. Kwaye ngaphezulu koku, ukunyusa kwakho, kuba umxholo kunqabile ukuba uphumelele uwedwa, kwaye ucwangcise ukuhamba kwawo rhoqo: yonke imihla, ngeveki, ngenyanga.
Tune kunye nabaphulaphuli bakho
Ujoliso lomxholo wakho kufuneka lujolise kuluntu olutyeleleyo kunye negalelo kwimpumelelo yeshishini lakho. Undwendwe olutsha, umzekelo, alunanyani. Ke ngoko, kugxilwe ekukhuthazeni umxholo ukuguqula, umxholo kunye neenjongo, kunye nexabiso lebrendi ukukhulisa.
Abathengi abakhoyo, okwangoku, baneeseti ezahlukeneyo zezinto eziphambili kunye neemfuno., ke umxholo kufuneka uphathwe ngokwahlukileyo. Ukubakhulisa, ukukhuthaza ukunyusa, kunye nokwenza lula ubuchule be-upsell zizitshixo zokuqhuba ukoneliseka kwabathengi kunye nentengiso yexesha elizayo.
Unokufumana izicwangciso zeshishini kukhuphiswano olunokuthi lubangelwe lelakho. Oko kukuthi, ukuba uthengisa iziqholo kwi-intanethi, jonga amagama aphambili asetyenziswa kukhuphiswano lwakho. Ke unokuseka incoko efanayo kwaye utsale utyelelo olutsha kwishishini lakho. Ngale nto, inani lezithuthi elifikelela kwindawo yakho liyonyuka.
Iifoto, zibaluleke ngakumbi kunokuba kubonakala
Ngokukodwa xa sithetha ngeemveliso zokwenyani ezifana neziqholo okhankanywe ngasentla. Umxholo obonakalayo, njengemifanekiso, ividiyo, kunye ne-infographics, inokuba sisixhobo esinamandla kulo naluphi na uphawu olujonge ukunxibelelana ngokukuko nabafundi balo.
Qala ngokwahlula isicatshulwa somzimba ngemifanekiso enomtsalane (kubandakanya imifanekiso yeAlts) ukukhuthaza abaphulaphuli bakho ukuba bagqibe ukufunda kunye nokwandisa isikhundla sakho kwiinjini zokukhangela. I-infographics ikwanceda ukudibanisa umxholo kwizikrini ezibonakalayo inomtsalane kwaye iyaqondakala ngokulula.
Abandwendweli kwindawo yakho bakwalindele ukuba ubonelele ngomxholo wevidiyo. Bonisa ubuntu bakho njengoko unxibelelana nabo ngelixa ubabonelela ngolwazi oluhlangabezana neemfuno zabo. Njani-iividiyo, iidemo, kunye nobungqina bamakhasimende onke amathuba okuqwalaselwa.
Ezi ngcebiso njengabanye abaninzi zinokusinceda sibeke ibhlog yethu kwindawo yokuqala. Kuyimfuneko ukuba kuthathelwe ingqalelo amanqaku aphezulu, ngenxa yemfuno enkulu ekhoyo kwinethiwekhi. Ukuba sithathela ingqalelo ukuthengisa nayiphi na imveliso okanye ukubhala naliphi na inqaku kukho iisayithi ezingaphezulu kwesigidi, umsebenzi omninzi ekufuneka siwenzile. Njengomxholo kunye nokuma kwe-SEO ngokweenkqubo ezinje nge-Yoast SEO zibaluleke kakhulu kwimveliso yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iingcebiso ze-4 zokuba yeyokuqala kwiinjini yokukhangela zikaGoogle